တပ်မတော်ကာကွယ်ရေးဦးစီးချုပ် ဗိုလ်ချုပ်မှူးကြီးမင်းအောင်လှိုင် မြန်မာနိုင်ငံဆိုင်ရာ အိန္ဒိယနိုင်ငံ သံအမတ်ကြီး H.E. Mr. Vikram Misri အား လက်ခံတွေ့ဆုံ » ဗိုလ်ချုပ်မှူးကြီး မင်းအောင်လှိုင်
ဒီဇင်ဘာ ၁၈၊ ၂၀၁၈
တပ်မတော်ကာကွယ်ရေးဦးစီးချုပ် ဗိုလ်ချုပ်မှူးကြီးမင်းအောင်လှိုင် သည် တာဝန်ပြီးဆုံး၍ ပြန်လည်ထွက်ခွာမည့် မြန်မာနိုင်ငံဆိုင်ရာ အိန္ဒိယနိုင်ငံသံအမတ်ကြီး H.E. Mr. Vikram Misri အား ယနေ့နံနက်ပိုင်းတွင် ရန်ကုန်မြို့၊ ကုန်းမြင့်သာရှိ ဇေယျာသီရိဗိမာန်၌ လက်ခံတွေ့ဆုံသည်။
အဆိုပါတွေ့ဆုံပွဲသို့ တပ်မတော်ကာကွယ်ရေးဦးစီးချုပ်နှင့်အတူ ကာကွယ်ရေးဦးစီးချုပ်ရုံး(ကြည်း)မှ ဒုတိယဗိုလ်ချုပ်ကြီးစိုးထွဋ်နှင့် တပ်မတော်အရာရှိကြီးများတက်ရောက်ကြပြီး မြန်မာနိုင်ငံဆိုင်ရာ အိန္ဒိယနိုင်ငံ သံအမတ်ကြီးနှင့်အတူ မြန်မာနိုင်ငံဆိုင်ရာ အိန္ဒိယနိုင်ငံ ကြည်းတပ်စစ်သံမှူး၊ ရေတပ်စစ်သံမှူးနှင့် တာဝန်ရှိ သူများ တက်ရောက်ကြသည်။
ထိုသို့တွေ့ဆုံရာတွင် အိန္ဒိယသမ္မတကြီး၏ မြန်မာနိုင်ငံချစ်ကြည်ရေးခရီးစဉ်အောင်မြင်မှုအခြေအနေများ၊ တပ်မတော်နှစ်ရပ်အကြား ရင်းရင်းနှီးနှီးဖြင့် နီးကပ်စွာပူးပေါင်းဆောင်ရွက်လျက်ရှိခြင်းကြောင့် နှစ်နိုင်ငံနှင့် တပ်မတော်နှစ်ရပ်အကြား ချစ်ကြည်ရင်းနှီးမှုပိုမိုတိုးတက်ကောင်းမွန်လာသည့်အခြေအနေများ၊ မြန်မာနိုင်ငံ ရင်ဆိုင်နေရသည့်စိန်ခေါ်မှုများနှင့် အခက်အခဲများအပေါ် အိန္ဒိယနိုင်ငံ က မြန်မာနိုင်ငံဘက်မှ အားပေး ထောက်ခံရပ်တည်ဆောင်ရွက်ပေးလျက်ရှိသည့်အခြေအနေများ၊ နှစ်နိုင်ငံနယ်စပ်ဒေသလုံခြုံရေး၊ တည်ငြိမ် အေးချမ်းရေးနှင့် ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်ရေး အတွက် ကျယ်ကျယ်ပြန့်ပြန့်ပူးပေါင်းဆောင် ရွက်နေမှုအခြေအနေများ၊ တပ်မတော်နှစ်ရပ် အကြား လေ့ကျင့်ရေးဆိုင်ရာကိစ္စရပ်များ တွင် ပူးပေါင်းဆောင်ရွက်နေမှုနှင့် ချစ်ကြည် ရင်းနှီးမှုပိုမိုတိုးတက်စေရေးအတွက် အဆင့်မြင့်ခေါင်းဆောင်များအပြင် စစ်မှုထမ်းများ အဆင့်လိုက် ချစ်ကြည်ရေးခရီးများ အပြန်အလှန်လည်ပတ်ရေးဆိုင်ရာကိစ္စရပ်များအား ရင်းနှီးပွင့်လင်းစွာ အပြန်အလှန် ဆွေးနွေးခဲ့ ကြသည်။
ယင်းနောက် တပ်မတော်ကာကွယ်ရေး ဦးစီးချုပ်နှင့် မြန်မာနိုင်ငံဆိုင်ရာ အိန္ဒိယနိုင်ငံ သံအမတ်ကြီးတို့သည် အမှတ်တရလက် ဆောင်ပစ္စည်း အပြန်အလှန်ပေးအပ်ပြီး တက်ရောက်လာကြသူများနှင့်အတူ စုပေါင်း ဓာတ်ပုံရိုက်ခဲ့ကြသည်။
တပျမတျောကာကှယျရေးဦးစီးခြုပျ ဗိုလျခြုပျမှူးကွီးမငျးအောငျလှိုငျ မွနျမာနိုငျငံဆိုငျရာ အိန်ဒိယနိုငျငံ သံအမတျကွီး H.E. Mr. Vikram Misri အား လကျခံတှဆေုံ့
တပျမတျောကာကှယျရေးဦးစီးခြုပျ ဗိုလျခြုပျမှူးကွီးမငျးအောငျလှိုငျ သညျ တာဝနျပွီးဆုံး၍ ပွနျလညျထှကျခှာမညျ့ မွနျမာနိုငျငံဆိုငျရာ အိန်ဒိယနိုငျငံသံအမတျကွီး H.E. Mr. Vikram Misri အား ယနနေံ့နကျပိုငျးတှငျ ရနျကုနျမွို့၊ ကုနျးမွငျ့သာရှိ ဇယြောသီရိဗိမာနျ၌ လကျခံတှဆေုံ့သညျ။
အဆိုပါတှဆေုံ့ပှဲသို့ တပျမတျောကာကှယျရေးဦးစီးခြုပျနှငျ့အတူ ကာကှယျရေးဦးစီးခြုပျရုံး(ကွညျး)မှ ဒုတိယဗိုလျခြုပျကွီးစိုးထှဋျနှငျ့ တပျမတျောအရာရှိကွီးမြားတကျရောကျကွပွီး မွနျမာနိုငျငံဆိုငျရာ အိန်ဒိယနိုငျငံ သံအမတျကွီးနှငျ့အတူ မွနျမာနိုငျငံဆိုငျရာ အိန်ဒိယနိုငျငံ ကွညျးတပျစဈသံမှူး၊ ရတေပျစဈသံမှူးနှငျ့ တာဝနျရှိ သူမြား တကျရောကျကွသညျ။
ထိုသို့တှဆေုံ့ရာတှငျ အိန်ဒိယသမ်မတကွီး၏ မွနျမာနိုငျငံခဈြကွညျရေးခရီးစဉျအောငျမွငျမှုအခွအေနမြေား၊ တပျမတျောနှဈရပျအကွား ရငျးရငျးနှီးနှီးဖွငျ့ နီးကပျစှာပူးပေါငျးဆောငျရှကျလကျြရှိခွငျးကွောငျ့ နှဈနိုငျငံနှငျ့ တပျမတျောနှဈရပျအကွား ခဈြကွညျရငျးနှီးမှုပိုမိုတိုးတကျကောငျးမှနျလာသညျ့အခွအေနမြေား၊ မွနျမာနိုငျငံ ရငျဆိုငျနရေသညျ့စိနျချေါမှုမြားနှငျ့ အခကျအခဲမြားအပျေါ အိန်ဒိယနိုငျငံ က မွနျမာနိုငျငံဘကျမှ အားပေး ထောကျခံရပျတညျဆောငျရှကျပေးလကျြရှိသညျ့အခွအေနမြေား၊ နှဈနိုငျငံနယျစပျဒသေလုံခွုံရေး၊ တညျငွိမျ အေးခမျြးရေးနှငျ့ ဖှံ့ဖွိုးတိုးတကျရေး အတှကျ ကယျြကယျြပွနျ့ပွနျ့ပူးပေါငျးဆောငျ ရှကျနမှေုအခွအေနမြေား၊ တပျမတျောနှဈရပျ အကွား လကေ့ငျြ့ရေးဆိုငျရာကိစ်စရပျမြား တှငျ ပူးပေါငျးဆောငျရှကျနမှေုနှငျ့ ခဈြကွညျ ရငျးနှီးမှုပိုမိုတိုးတကျစရေေးအတှကျ အဆငျ့မွငျ့ခေါငျးဆောငျမြားအပွငျ စဈမှုထမျးမြား အဆငျ့လိုကျ ခဈြကွညျရေးခရီးမြား အပွနျအလှနျလညျပတျရေးဆိုငျရာကိစ်စရပျမြားအား ရငျးနှီးပှငျ့လငျးစှာ အပွနျအလှနျ ဆှေးနှေးခဲ့ ကွသညျ။
ယငျးနောကျ တပျမတျောကာကှယျရေး ဦးစီးခြုပျနှငျ့ မွနျမာနိုငျငံဆိုငျရာ အိန်ဒိယနိုငျငံ သံအမတျကွီးတို့သညျ အမှတျတရလကျ ဆောငျပစ်စညျး အပွနျအလှနျပေးအပျပွီး တကျရောကျလာကွသူမြားနှငျ့အတူ စုပေါငျး ဓာတျပုံရိုကျခဲ့ကွသညျ။